हिड्दा हिड्दै खुट्टा भुईमा झ र्यो ,उपचार गर्ने पैसा छैन यस्तो बि जोग - ABNews Nepal
विचार समाचार समाज स्वास्थ्य
Mar 3, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, ganga lama, headline nepal, katathmandu news, latest khabar, latest nepali song, latest news, latest ramailo samachar, taja khabar nepal
ईलाम जिल्ला माई नगरपालिका वडा नम्बर मुसिखोला निवासी बिना एक्तेन लिम्बू नाम गरेकी एक महिला जो बिगत एक महिनादेखी दाहिने खुट्टामा लागेको क्या” न्स”र” जस्तै भयानक रोगको कारण ओछ्यानमा ल”म्प”सा”र परेकीछिन, उनै महिला रु”दै र क”रा”उदै सहयोगको अपेक्षा का साथ आज भने मिडियामा आएकीछिन्। दाहिने खुट्टामा देखिएको यो रो”गका कारण उनी एक महिनादेखी ओछ्यानको ओछ्यान भएर ल”म्प”सा”र परेकीछिन ।
क”ठै ब”रा ! जिबन र मृ”त्युको बिचमा आफ्नो जिन्दगी चलाइरहेकी उनिसँग उपचारको लागि एक रुपैयाँ पनि नरहेको तर आफूलाई बाँ”च्ने ठूलो रहर भएको उनी बताउँछिन । दैबको कु”दृ”ष्टि पनि दु”खि”याकै जिबनमा पर्नुपर्ने, क”म”जो”र आर्थिक अबस्था भएकि बिना अहिले दाहिने खुट्टाको अ”प्रे”स”न गर्न नपाउदा म”र्नु न बाँ”च्नु भएकीछिन । उपचारको लागि चितवनसम्म पुगेकि रहिछिन उनी । क्या”न्स”र पत्ता लागेपछी भने पैसाको अ”भा”ब”मा आफू उपचार नै नगरी फर्किन बा”ध्य भएको बताउँछिन उनि ।
आफ्नो भन्दा बढी छोराछोरीको चि”न्ता रहेछ उनलाई, आफूलाई केही भै”गयो भने छोराछोरीलाई कसले हेर्छ भन्दै खुब रु”इ”न उनी । आफुलाई बाँच्ने रहर भएको र छोरा छोरीलाई खुशी दिने रहर भएको बताउँछिन उनी । ओछ्यानको ओछ्यान दि”सा”पि”सा”ब एकैठाउँ भएकीछिन उनि । उनले युट्युबमार्फत सबै आफन्तजन लगायत इष्टमित्रलाई रु”दै आफ्नो अबस्थाबारे जानकारी गराउदै सहयोग गरिदिनको लागि अनुरोध पनि गरिन ।
उपचार नपाउँदा उनको अबस्था दिन प्रतिदिन बि”ग्री”दै गएको छ । क”ठै ब”रा ! मलाई बचाइदिनु भन्दै रुन्छिन उनि, आफ्नो खु”ट्टो का”ट्न पनि तयार रहेको बताउँछिन उनी । बिदेशमा रहेका भाईहरु, भाउजू नन्दा सबैलाई उनले आफ्नो दु”ख देखाएर सहयोग मागिन । छोराछोरीको आडले मात्र उनी यता उता फर्किन सकेको बताउँछिन । घरमा लठ्ठी टेकेर बिस्तारै हिड्दै गर्दा उनको खु”ट्टा प”ड्”कि”ए”को र उनको यो हा”ल”त भएको परिवारको भनाई रहेको छ ।
शुशिला नाम गरेकि उनकि सानी छोरिले पनि आमाको लागि सहयोगको माग गरेकिछिन । खाना खाएर बाहिर निस्केकी उनको खु”ट्टा एक्कासी झ”ड”क्क गरेको र अहिले भने आफू ओछ्यानको ओछ्यान भएको उनको भनाई छ । श्रीमान र एउटा छोरालाई उपचारकै लागि भनेर कमाउन पठाएको बताउँछिन उनि । क”ठै ती सानी छोरी क”म”जो”र आर्थिक अबस्थाका कारण पढ्न नपाएको र आमाको स्याहारसुसार गरेर बस्नेगरेको बताउँछिन ।
बाँकी हेर्नुस तलको भिडियोमा:- https://youtu.be/cHCjtqR3s_4